Xulka qaranka gabdhaha USA oo 13 gool ku garaacay dhiggooda Thailand kulan ka tirsan Koobka Adduunka ee Dumarka… + SAWIRRO – Gool FM
(Paris) 11 Juunyo 2019. Xulka qaranka Gabdhaha Mareykanka ayaa guul 13-0 ka gaartay dhiggooda Thailand kulan ka tirsan heerka guruubyada Koobka Adduunka ee haweenka 2019.
Waxa uu kulankan ka tirsanaa guruubka F ee koobka Adduunka Dumarka, qeybtii hore ayaana lagu kala nastay 3-0 ay ku horkacayeen gabdhaha Mareykanka.
Qeybtii labaad ee ciyaarta xulka gabdhaha ee qaranka USA ayaa bandhiggooda wacan sii watay shan daqiiqo ay ku dhaliyeen afar gool, taasoo natiijada ciyaarta ka dhigtay inay 7-0 kaga gacan sarreeyeen gabdhaha Thailand.
Shan ka mid ah goolasha xulka Mareykanku ay la yimeedeen kulankan waxaa dhalisay gabadha lagu magacaabo Alex Morgan.
13-ka gool oo ay ku adkaadeen xulka gabadhaha USA ayaa u kala dhashay sidan; 12’daqiiqo Alex Morgan, 20′ Rose Lavelle, 32′, Lindsey Horan, 50′ Samantha Mewis, 53′ Alex Morgan, 54′ Samantha Mewis, 56′, Rose Lavelle, 74′ Alex Morgan, 79′ Megan Rapinoe, 81′ Alex Morgan, 85′ Mallory Pugh, 87′ Alex Morgan, 90′ Carli Lloyd.
Si kastaba ha ahaatee kulanka ayaa ku soo dhammaaday 13-0 oo xulka gabdhaha USA ay ku xasuuqeen dhiggooda Thailand kulan ka tirsan heerka guruubyada Koobka Adduunka ee haweenka 2019.
Tani waxay ka dhigan tahay in xulka gabdhaha USA ay farqiga goolasha ku hayaan hoggaanka guruubkooda F inkastoo ay saddex dhibcood la wadaagaan dhiggooda Sweden koobka Adduunka ee dumarka.